Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo heshiis hor-u-dhac ah ka gaaray arinta Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo heshiis hor-u-dhac ah ka gaaray arinta Gedo
Madaxweyne Farmaajo iyo madaxa hoggaanka Jubbaland oo xalay kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa heshiis hor u dhac ah ka gaaray arinta gobolka Gedo, iyadoona loo xil saaray guddi min hal xubin ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hohgaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam 'Axmed Madoobe' ayaa xalay kulan gaar ah ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliya, kaasoo lagu lafa guray xaaladda amni darro ay DF ka abuurtay gobolka Gedo.
Kulanka oo intiisa badan lagu wajahay isfaham waaga u dhaxeeyo labada dhinac ayaa heshiis hor u dhac ah looga gaaray arinta gobolka Gedo, waxaana la isla gartay in guddi farsamo oo min hal xubin ah loo saaro ciidamada dowladda ay geysay Gedo iyo tabashada Jubbaland.
Dhinaca kale waxaa saaka oo Sabti ah lagu wadaa in ay kulan saddex geesood ah yeeshaan madaxda maamulada Puntland, Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo, kaasoo looga hadlayo arrimaha dhex dooda ah, waxaana la sheegayaa in ay haatan jirto kalsooni isku isku soo dhawaansho ah, oo dhinacyada muujinayaan.
Wararka ayaa sheegaya in la isla qaatay in kulamada soo socda ay ku soo biiraan Saddexda Madaxweyne Dowlad Goboleed, taasoo Madaxweynuhu dhankiisa ogolaaday inuu martiqaadi doono, waxaana la filayaa in ay Muqdisho dhawaan soo gaaraan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug.